VAKO VANODA VANOGONESESA DZIMWE KUFAMBA MUCAMPER - THE INDIAN FACE
Tichangobva kukuudza nezve camper van revolution, imwe yazvino maitiro kana zvasvika pakufamba. Pasina kupokana kuratidzwa kwemweya wedu wekushuvira, wezvedu zvakanyanya muIndiya, uye isu tinoda tichiziva kuti, sesu, vanhu vakaita semi vanodawo kubuda munzvimbo yavo yekunyaradza uye vape inozivikanwa se #VanLife. Muchinyorwa ichocho takakuudza iko kufamba uku kwakabva, ndedzipi mhando dzematende emisasa dziripo, izvo zvakanaka zvechiitiko uye kuwedzera mukurendesa idzi mota. Saka kana wakarasikirwa, mhanya kuti uverenge nekuti inoshanda kwazvo uye inonakidza. Shoko re muIndiya!
Zvino, kana iyi imwe nzira iri kuwedzera kuitika kupfuura nakare kose, haisi chete nekuda kwedenda uye post-Covid matanho ekudzvinyirira atakatadziswa patinenge tichifamba; asiwo nekutenda kune vanokurudzira. Muchokwadi, mune zvakatumirwa pawebhusaiti yedu yatinotaura, takawana imwe yemakambani akacheka-cheka mukurendesa kworudzi urwu rwevans muSpain inonzi Munhenga Van. Akazvarwa mukati medhi yedhijitari, anotsvaga kuburitsa divi rinonyanya kutsvaga remufambi uye tinozvida izvozvo. Vanamuzvinabhizimusi vanotarisira chirongwa ichi chinoshamisa ndivo vanokurudzira Alba Paul Ferrer neshamwari yake Lucía, uye chirongwa chavo chekutaurirana chinozvitaurira: vanoziva zvavari kuita.
Uye ndeyekuti iyi kambani inoroja kambani, pamwe nevamwe vazhinji, yakwanisa kukwezva vamwe vanokurudzira zvakanyanya mukati mezvino panorama, kungave, zvirokwazvo, kubvarura, kana kutenga imwe. Iwe unoda here kuziva izvo zvavari? Isu tichakuudza!
VANOGONESESA VAKARARAMA ZVAKAITIKA CAMPER
Iyi yeSpanish modhi, dhizaini uye mushanyi, inozivikanwa zvakare nekuve neimwe yeembwa dzinonyanya kufadza pasi rose, yakatanga kusimukira mukurumbira wekuhwina iyo yechishanu edition yeEITB (El Conquistador del Fin del Mundo), chiratidziro chaicho paBasque yedunhu network .. zvayo mweya wekusango uye wakashinga inokutora iwe kuti uzive makona akanakisa, zvese muSpain nekune dzimwe nyika, mukati memusasa wake. Zvakare, sezvakanaka Mutambi wemitambo, anofarira kufura pamusoro pemvura uye nezvimwe zviitiko zvemvura, uye mune mazhinji mafoto ake isu dzimwe nguva tinowana bhodhi rake neweti yake yemvura, yakagadzirira yake inotevera ushingi.
2. DHANIERI ILLESCAS (@danielillescas)
Daniel Illescas ane vateveri vane miriyoni paakaundi ye Instagram uye zvirimo zvinokwezva chero vanofarira nezve mhando yekutora mifananidzo and the nzvimbo dzinoyevedza kwazvo. Uye, pamusoro pekuve modhi, youtuber uye nyanzvi yekukurukurirana, unogona kuona kuti ane mweya wekuda mukati make uyo wakamutungamira kuti atore kambasi kombi kuti apedze imwe zororo. Akafarira mazuva mashoma munzira nemudiwa wake wazvino uye vakatora rwendo kuburikidza nenzvimbo dzinenge dzakavanzika, izvo zvinoita kuti rive rakanyanya kukosha. Ndiri kureva, kuona izvi, ndiani asingade kuzviita futi?
Susana Molina, anozivikanwa saSusana "Bicho" nezita rake rekuti Instagram, akasvetukira munzvimbo yemidhiya nekuda kwechiratidzo chaicho che Mukoma. Gare gare takazomuona achipinda Chitsuwa chemiyedzo seimwe yeakanyanya kufarira. Nekudaro, kure neake pa-screen mukurumbira, isu takaona kuti iye anokurudzira anewo rutivi rwevanonyanya kufarira. Iye akatengesa pakugadzira nzira mumusasa uye shandisa imwe mazuva akasiyana umo, sezvazvinoratidzika munhoroondo yake, ainakidzwa zvikuru.
SaSusana Molina, Hugo Pérez akatangawo basa rake rezvenhau muchirongwa che Mukoma uye yaive chikamu cheimwe yezvinyorwa zve Chitsuwa chemiyedzo. Mune chimiro chake anoratidza vateveri vake zvakanyanya hushingi uye mutambo, kuita nzira dzekukwira, snorkeling, kuchovha bhasikoro, kufambisa padenga, kukwira jet skis ... uyezve, futi kufamba musasa. Mazuva ese anotishamisa nemavara matsva uye mafoto e nature mhando. Iyewo anoda mhuka uye anogara achiedza kuperekedzwa pane zvaanoona.
Angela haazivikanwe nezita rake rekutanga, asi nezita rake reinternet: Madame de Rosa. Izvo zvese zvakatanga paakavhura yake yemafashoni uye yehupenyu blog muna2011, uye kubvira ipapo akaonekwa pane mashoma terevhizheni, uye kumashure kwezviitiko seye stylist. Mukoti nehunyanzvi, kukura kwake kukuru pasina mubvunzo kwave mune rake Instagram nhoroondo, uye isu tinoda kuona kuti vanhu vakaita saiye vanopawo sei izvi zve camper ushingi. Pakupera kwezuva, anogona kunge ari iye akajeka muenzaniso wehupenyu uine nguva dzose yakabatikana purogiramu, inomuda iye nguva dzekudimburwa. Ndeipi nzira iri nani yekuzviita kupfuura nerwendo rwemugwagwa kubva kuguta?
Anofarira kubva pazera diki kwazvo, Jonan Beltrán Wiergo akasimuka kuita mukurumbira nekutenda kuchirongwa chePekín Express muna 2016. Kubva ipapo, muValencian anoziva kutaridza kumeso kwake kwakashinga mupurojekiti yega yega yaakaita. Anoda kufamba uye account yako inogona kuve mepu yepasi rese mune yemifananidzo vhezheni. Jonan anga ari kakawanda bheji pamigwagwa yemisasa, uyezve chaive chimwe chezviso zveiyo raffle yakaitwa neresitoreti yeVoltereta (iyo yatinozokuudza zvishoma pazasi).
Zvinogona kutaurwa kuti nzira yaAida Domenech, inowanzozivikanwa seDulceida, yanga yakafanana chaizvo neyaambotaurwa Madame de Rosa. Akavhura bhurogu muna2009 pasi pezita chairo raanozivikanwa nhasi, achiratidza kuda kwake fashoni, dhizaini nemararamiro kusvika zvinoenderana nemafambiro azvino. Kuonekwa kwe Instagram kwakamuita kuti asvetukire muhupenyu hweveruzhinji nekukurumidza, uye akatora chikamu mune mamwe maTV. Akagara ari munhu anokurudzira anofarira zvekufamba uye nemweya wekutengesa. Akasarudzawo kuita migwagwa mukombi yemisasa, kungave muzhizha kana munguva yechando.
RUDZINGA RWEKAMPANI RAKAVE RUKUONA
Chokwadi iwe unorangarira imwe yeanonyanya hutachiona Instagram kupaaways e2020 umo uyo anokunda akapihwa musasa. "Mhosva" iyo mazana ezviuru zvevaSpanish vakagovana bhuku iri mune yavo nyaya yaive yakakurumbira yekutengesa yeValencian inonzi Voltereta (iyo yatakaedza nekuida, asi ndiyo imwe nyaya). Chiitiko chekusimudzira chakashanda sechitubu chekuzivisa kuvhurwa kwayo kwechitatu muguta reValencian, uye pasina mubvunzo vese veValencia (nenyika yese) vakadaidzira nhau. Vhidhiyo yekusimudzira iyi yakasvika miriyoni dzemashoko. Mamiriyoni! Wese munhu aida iyo van iyo timu yekuresitoreti yakasimbisa kuve yakagadzirirwa uye kuisa musasa mu zvakazara munhu uye, hongu, yakanyatso shongedzerwa. "(…) Nezvose zvaunoda kuti uite famba nyika. Sezvo zvinonzwika: mubhedha / pasofa, kicheni, shawa, tafura, kushongedza… kusvika patinonzwira tsitsi kuzvipa isu mushure mekuzviita nechido chakadai (…) ”, akadaro chinyorwa chebhuku racho. Sarudzo yechigadzirwa che raffle, iyo kambasi kombi, inotaura zvakawanda nezve mweya weresitorendi. Muchokwadi, kunyangwe nharaunda yedu inonzwa ichizivikanwa neboka revatengesi vane mutsara unotakura semureza wayo Kugamuchirwa parwendo. Ndiri kureva, hupenyu hungadai hwakaita sei kana tikasautora sechiitiko? Chii chingave icho kana tikazvikwanira isu kune izvo zvatinoziva, kana isu tisina kuisa njodzi?
Mhedziso yekuti zvinyorwa zvakawanda zvadoma kutaura nezve ichi chiito chekushambadzira uye chatinobvumirana nacho, ndechekuti nzanga yeSpain inoda kuita shanduko diki. Mararamire atakaziva kusvikira zvino ane nyota yezvakawanda. Rwendo mumusasa rinogona, zvimwe, kwete zvakanyanya kuchinja hupenyu hwako, asi haikusiye usina hanya. Ruzivo rwekugara murusununguko, munzira, mukubatana zvizere nehunhu, uchienda nezvakanaka uye zvakafanira (pasina kukanganwa tora iwe mumwe wedu ngowani kuti uzvidzivirire kubva kuSuva) uye ugovane yakanaka nguva nevanhu avo vane musoro wezvinhu zvese ... ndizvo zvinonyanya kukosha.
Zvino, ndiani akakunda musasa? Anonzi Marta Carceller uye, sekuunganidza kwatakaita kubva mumisoro yenyaya dzakasiyana yaitaura nezvenhau idzi, akasiya makumi maviri neshanu zvataurwa pamusoro pebhuku iri. Paive nevashandisi vakauya kuzoisa vangangoita zana uye, nekudaro, pasina kutenda kuti achazohwina raffle, haana kana kupinda muhupenyu hwavakaita kubva kuakaundi account yeresitorendi mavakazivisa kuti anokunda. Shamwari dzake dzaifanira kumuudza kuti apinde. Enda uone! Chaizvoizvo, zvinonzwisisika. Ndiri kureva, isu tinogara tichifunga kuti "Instagram kupaaways haambobata" asi ... unoyeuka here yatakaita? Chaizvoizvo! Isu tiri vekutanga ku tinoda kukuperekedza parwendo urwu, chii hupenyu. Mutsa mweya wekutsamwa uyo watinoziva iwe unotakura mukati.
NDIANI ANGAKUBATSIRA NAYE #VANLIFE?
Zvakanaka, chinhu chekutanga chatinokurudzira ndechekuti iwe uverenge yedu yapfuura chinyorwa chakataura, chaizvo, izvi camper vans. Zvino, iwe unoda kuyedza iyo musasa ruzivo uye hauzive pekutangira? Zvakanaka, ngatitangei kushanda! Isu takakuudza nezve vakasiyana vanopesvedzera vakaifarira, asi chokwadi ndechekuti kune mamwe akawanda maakaundi ayo anogona kukubatsira iwe nebasa iri rekuita musasa iwe pachako. Vanoitisa kuti zvionekwe nyore! Iwo maprofiles ane hunyanzvi mukuudza mumasocial network avo zvese zviripo zvekuziva nezvenyaya iyi, uye vese zvavo ngatitaurirei tichinyangira mukati medzimba dzavo nemavhiri. Nezvo chete, bhagi rinotiruma tese. Zvichava sei chaizvo rarama iyo #VanLife zvizere?
Huru yekutanga yatave neziso redu inonzi @thevandreams. Kumashure kwake ndiRaquel naJesús, murume nemukadzi vekuMadrilenian avo vanga vari "kubvira 2015 vachitsvaga hupenyu kuburikidza nevhavha", sezvakataurwa mune yake Instagram biography. Zviri mukati maro ndezvese zvaunoda kuona kana iwe uri munzira kuenda kubasa uchishamisika kuti vhiki rinotevera rinenge riini iwe paunogona kutiza uchibva kunze kweguta. Gungwa, makomo, kuvira kwezuva, mabiko emangwanani nemaonero, kufambira kumahombekombe ari kure ... ndiani asingade kurarama hupenyu hwakadai? Zvirinani tinogona kuzviwana kuburikidza nekamera yake.
Isu takawana imwe account diki diki asi nehunhu hwemukati hwakatisanganisa zvachose. Yakatumidzwa zita @roadforgreta Uye, sezvaungave watoona kare, protagonist ndiye iye Volkswagen Multivan anonzi Greta. Varidzi vayo, Ana naMarco, vanopfuura nemunzvimbo dzisingaperi uye vanogovana nevateveri vavo, uye kunyangwe mota iyi iine makore makumi matatu ekuberekwa, vanoichengeta sekunge yaive yemhuri uye inoratidza. Tinoda!
Iyo yekupedzisira account yatinoda kukuratidza inonzi @woodvans_loren uye muridzi wayo ane kuda chaiko kwemaveni. Iye anogara "munzira", sekuratidzwa mune dzake nyaya paanosvika munzvimbo nyowani akazara nehunhu. Isu tinonyatsoda mweya wako wekuita mabhizimusi. Chii chakanyanya kuIndia pane kushinga? Ari kuita chirongwa chakanyorwa chinonzi "This is #VanLife", pamusoro pekuti akatanga kambani yemisasa, homologations uye kugadzirisa maveni anonzi Woodvans akagadzirwa nemaoko.
Une magirazi ezuva here The Indian Face uye hauzive kuti ungazvichengeta sei kuti uvimbise mamiriro avo akakwana? Usanetseke! Muchikamu chino tichakupa 5 mhinduro dzinogoneka dzekuti iwe uite, mukati
Masitaera mana akasiyana emagirazi ezuva evakadzi ayo anotsanangudza maitiro ako nehunhu, kuve pamberi. Tinoda kukuzivisa iwe kune 'Soma, Southcal, Lombard neLaguna', iyo inokuwana iwe
En The Indian Face isu tiri vateveri vakuru veiyi yezhizha yekufamba kwemaitiro - macamper vans! Isu tinokuudza zvese: kana kufamba kwakamuka, ndedzipi mhando dzemisasa dziripo, nzvimbo dze
Kushushikana, kushushikana uye kusatarisira zvinogona kuve zvinhu zvinokanganisa hupenyu hwedu tisingazvizive. Dzimwe nguva tiri pano mumuviri, asi pfungwa dzedu
Avo vakave nepfungwa yekuunza pamwe chete iyo miviri yemitambo inoburitsa pfungwa huru kwazvo yerusununguko uye kugadzira surfskate, pasina mubvunzo #freepirit. Muchinyorwa chedu nhasi tinokuudza
Iwe uri mumwe weavo vanotenda kuti zvese zvinoitika nekuda kwechikonzero? Mushure meichi chinyorwa, iwe unozosimbisa ichi chivimbo. Nekuti paivepo panguva iyoyo, mujaho wakaitirwa vatasvi nemabhiza avo, asi yaive h
Kufamba kuri chikamu cheMitambo yeOlympic chinhu chinotizadza nekudada. Uyu mutambo unotamba nemhepo nemafungu zvinounza kunzwa kweadrenaline, rusununguko uye tsinga paT chaipo.
Zvitsuwa zveCanary neBalearic Islands zvinokwanisa kupa akasiyana siyana zviitiko zvekuita, senge dzakasiyana nzendo uye nzira dzekukwira dzinoperera pamhenderekedzo yegungwa, asi zvakare pagomo